Michigan Cannabis Bhizinesi Gweta - Scott Roberts Law Anotaura MMFLA uye LARA
Michigan Cannabis Bhizinesi Gweta
Michigan Cannabis Bhizinesi Gweta Scott Roberts
​Michigan cannabis bhizinesi iri kusimuka apo Nyika painotanga kutora manyorerwo emabhizimusi ekuzvivaraidza munaNovember 1, 2019. Michigan yakanyoreswa pamutemo kushandiswa kwevanhu vakuru muna 2018 iine makumi mashanu neshanu muzana evhoti asi zvakafanotaurwa kuti bhizinesi rekutanga rekuzorora harizovhurike kusvika Nyamavhuvhu 56 .. Vhiki ino Miggy naTom vakabatanidzwa cannabis bhizinesi Scott Roberts anobva Scott Roberts Mutemo kukurukura nezveMannannis mamiriro epasi.
Kuno kuMichigan, mitemo ye cannabis nemirairo zvinogara zvichishanduka uye kuita kwemitemo kuchachinja pasina chero chiziviso. The MRA (Michigan Regulatory Agency) inotonga mbanje, dzimwe nguva inogona kungochinja kuverenga kwayo pazvinhu uye kana usingaiti iwe Pane ruzivo rwakawanda pawebhu asi kana iri rinopfuura gore kana maviri akura pane mukana hausisiri padanho. - Scott Roberts
Chii chinonzi Scott Roberts Mutemo?
Iyo yakazara-sevhisi cannabis bhizinesi mutemo mutemo
Inoshanda nekutanga-kumusoro uye mabhizinesi akasimbiswa
Inobatsira neese cannabis bhizinesi kubva mukutevera, kune marezinesi, kune bhizinesi rekutengeserana
Batsirai zvekurapa cannabis bhizinesi kutevedzera iyo yeMicrosoft Medical Marihuana Act (MMMA), iyo Mari Marianaanaana Licensing Act (MMFLA), Dhipatimendi reLensense uye Regulatory Affairs (LARA) mirau yemadunhu, uye mimwe mitemo inoshanda.
Yakatungamirwa muDetroit, Michigan
Chii chinonzi Cannabis Microbusiness?
Bhizinesi diki rinotenderwa kukura uye kuenzanisa zvinosvika zana nemashanu emakwenzi cannabis uye kugadzira uye kutengesa zvigadzirwa zvakananga kune vatengi kubva pazvibereko zvaro
Microbusinesses rakagadzirwa kuchengetedza nyika dzakaita seCalifornia neMichigan kubva kune "hombe cannabis" makambani ari kuda kudzora musika we cannabis
Vanonyorera ma Microbusinesses haadanirwe kuve nerezinesi rekurapa mbanje sezvinoita marezenisi ekuzvivaraidza
Microbusinesses ine mikana yakawanda yemikana yebhizinesi mukana kubva kune cannabis-themed arcades kune maresitorendi nemabhaisikopo emitambo
chii Michiganders Unofanirwa Kuziva Nezvevo Cannabis Kodzero
Mitemo ye cannabis zvine mukurumbira asi zvakakosha kuti uzive kodzero dzako semutengi uye mugari. Kunyangwe iwe uri muzvinabhizimusi kana mutengesi asina kujairika, usambozeza kusvika kune rimwe gweta kujekeswa uye kutungamirirwa. Vagari veMichigan pamusoro pezera ramakore makumi maviri nemasere vanogona:
Inorarama kusvika gumi oz yemaruva mumba mavo uye 10 oz kunze kweimba yavo
Kunyanya kusvika magiramu gumi neshanu ye cannabis inotenderera
Kura zvinosvika gumi nemaviri zvidyarwa mudzimba dzadzo
Zvokufambisa cannabis mune yakasungwa uye yakanyorwa mapepa yakachengetwa mudumbu remotokari (kana imwe nzvimbo iri mumotokari yako isingawanikwe nyore)
Scott Roberts Mutemo
Tom Howard pa ChemannabIndIndryryawawer.com
Miggy Cannabis Pamutemo Nhau
Kutanga uye mabhizinesi akasimbiswa anowanzotsvaga wega wega wega weManchester cannabis bhizinesi kutevedzera zviri pamutemo zvekurapa mbanje bhizinesi mutemo. Hazvina mhosva kana iwe uchida reMMFLA rezenisi, tenga zvivakwa, kana uchida kumisikidza kutenga kana kutengesa cannabis bhizinesi, iyo mvumo yeMarkn cannabis bhizinesi bhizinesi inogona kubatsira.
Ndeapi eCannabis Bhizinesi Mitemo muMichigan?
Musi waNovember 1, 2019, dunhu reMichigan rakatora danho rekupedzisira mumirairo inobvumira vanyoreri kutanga bhizinesi rembanje. Kutanga zvikumbiro zvakatotumirwa online, uye tinoona vazhinji vanyoreri vanoda kuzivisa zviri nani nezve mirairo nemitemo ine chekuita nembanje mbanje.
Basa rakakura reManta cannabis bhizimusi bhizinesi kukuzivisa iwe kuti unoenda sei kuburikidza nehurongwa hwemitambo, uye nzira yekudzikisa njodzi yepamutemo. Gweta rakanaka rinopa rutsigiro rwakazara mukufunga kuti ndeipi bhizinesi inodiwa fomu rekunyorera raunoda kuisa pasi pamwe nehurumende uye IRS.
Sekureva kweMicrosoft Regulatory Agency, varidzi vemabhizinesi vachazoda kupatsanura zvekurapa mbanje kana vachizoda kushanda muhurumende. Kazhinji kutaura, hapana musiyano wemakemikari pakati pekurapa nembanje mbanje. Nekudaro, iwe unofanirwa kubhadhara mutero wakakwenenzverwa wegumi muzana unoshanda kune dzinovaraidza mbanje. Izvi zvinoita ekuvaraidza mbanje bhizinesi zvishoma inodikanwa maererano nemirairo uye yakakodzera rubatsiro rwemari.
Iyo Michigan yeMannannis Bhizinesi Gweta Rinogona Sei Kukubatsira?
Kana iwe ukafunga kutanga bhizinesi rembanje rekurapa, rimwe gweta revashandi vekuMichigan cannabis rinogona kukubatsira munzvimbo zhinji. Iwe unofanirwa kubvunzana negweta rako nezve rudzi rweti rezenisi raunoda kuwana bhizinesi rako.
Mhando dzeLayisensi dzeCannabis Bhizinesi muMichigan
Paunofunga kuwana rezinesi, unofanira kugadzirira iyo cannabis bhizinesi application. Mudunhu reMichigan, unogona kunyorera marezinesi mashanu akasiyana. Izvi ndizvo:
• Kupa nzvimbo
• Chengetedza Transporter
• Nzvimbo yekutevera yekuchengetedza
Semunhu anokudza, iwe unofunga pakati pemakirasi matatu rezinesi yekutengesa. Kune A, B, uye C mhando dzemarezinesi dzinoratidza huwandu hwezvidyarwa zvaunogona kukura.
Provisioning Center imhando yerudzi rwechijana disensary. Kana iwe uchida kuve nenzvimbo yekupa kune rako bhizinesi, haugone kuve nekufarira kwemari mune yekutevera kuchengetedza nzvimbo kana seye inofambiswa yakachengeteka. Iwe unozoongorawo yakawedzera 3% mutero huwandu wemari yako.
Processor bhizinesi rinoshandisa cannabis kubva kuvarimi uye rinogadzira edibles, extracts, uye zvimwe zvigadzirwa zve cannabis.
Yakachengeteka transporter inotakura cannabis uye mari pakati pezvivakwa. Kuti uve mutakuri akachengeteka, haugone kunyoreswa semurwere kana muchengeti.
Dziviriro yekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwekuedzwa inodzidzisa THC zvirimo mune mbanje, uye mune iyi kesi, iwe unofanirwa kushandira mumwe munhu akabata dhigirii mumarabhoritari kana sainzi yekurapa.
Iko hakuna mirau yepamutemo inotaura kuti iwe unofanirwa kunge uine chako chaicho chivakwa bhizinesi re cannabis. Vazhinji vanyoreri vanoisa midziyo yavo pasi pechibvumirano, vozonyorera rezinesi, uye kana ikabvumidzwa, nzvimbo yacho inogona kutengwa. Nenzira iyi, iwe unoona kuti iwe wakachengetedzwa mune zvemari muitiro wekushandisa.
Maitiro Ekunyorera kweChipatara Marijuana License muMichigan
Kuti unyore rezinesi rekurapa mbanje kuMichigan, unofanirwa kuve uine hwakajeka nhoroondo, yakakodzera makore ekugara kuMichigan, uye guta rakakwana. Kana uchinge wapfuura iyi mhando ye prequalization process, unogona kusarudza rezinesi rezinesi.
Izvo zvakakosha kuti uzive kana guta rako reguta rine sarudzo yekusarudza inobvumira nzvimbo mbanje mune chaiyo chaiyo yedhorobha. Kana izvi zvichishanda kuguta rako, unogona kuvaka zvivakwa zvinodiwa kuti zvishande bhizinesi rako rekurapa mbanje.
Mushure mekupfuura prequalization maitiro, unogona kuenda kune chikumbiro rezinesi rako. Zvakakosha kutsanangura zvese zvebhizimusi rako uye nzvimbo chaiyo yezvivakwa zvako. Kana iwe ukasapa iro ruzivo chairwo, iwe uri panjodzi yekurambwa nevatungamiriri veMMFLA.
Nechikonzero ichocho, zvakanaka kuti ubvunze gweta rako revashandi veMichigan cannabis nezve zvese zvinodiwa. Kana iwe uchida kunyorera rezinesi rebhizinesi rezvekurapa, unofanirwa kufunga nezvemitemo yese inoshanda kune ako maseru. Bata iyo yakakodzera Michigan cannabis bhizimusi bhizinesi uye tsvaga zvese zvaunoda kuziva kuti uvhure bhizinesi rekurapa mbanje mbanje.
Bata Gweta weCannabis Bhizinesi muMichigan
Iyo yepamusoro-notch Marijuana Bhizinesi Mutemo Firm kushandira zvese kutanga-ups uye bhizinesi rakasimbiswa vanoita chiratidzo chavo paCannabis Industry. Wedu cannabis GwetaNdinoziva mitemo nemusika zvakapoteredzwa zvekurapa uye zvekuvaraidza mbanje pamwe Hemp uye CBD.
As cannabis magweta isu tinopa inokosha inokosha yemutemo uye bhizinesi zano kuti ubatsire iwe kutanga kwako kukura nzvimbo, kupa nzvimbo, kugadzirisa lab, yekuchengetedza nzvimbo yekuchengetedza, kambani yekufambisa yakachengeteka, kana cannabis utachiona.
Bata Scott Roberts Mutemo
Scott F. Roberts Mutemo, PLC
Tora zvinongedzo pamepu →